Ukubonakaliswa komzimba nezinto, ezivuma ezimpilweni zethu kahle, kungase kube onhlobonhlobo. Lezi zimpawu zihlanganisa ukukhwehlela futhi umkhuhlane, kanye ukuqubuka ahlukahlukene nokuvuvukala kwesikhumba futhi nolwelwesi lwamafinyila. ukubukeka Ngokusobala lezi pathologies lihlotshaniswa ukukhiqizwa umzimba ukuba izinto eziphila abakhuthele, okuholela komzimba. I kunazo asebenzayo we okuyinto histamine.
Ukuze balahle izimpawu ezingemnandi izidakamizwa kwemithi ayatholakala emakhemisi ezithinta umzimba. Le mithi bayakwazi ukuvimbela noma kuqedwe izimpawu ukusabela iguliswa ngenxa neutralization of histamine. Okunjalo kusho okuningi. Zakha iqembu jikelele antihistamine. Ukuma kokukhululwa nhlobonhlobo. izidakamizwa Antihistamine kungaba ngesimo amaphilisi kanye amaphilisi, Syrups, suppositories, okhilimu kanye yokugcoba. Futhi ekhiqizwa umjovo.
Ukuze baqonde izinto ezenzekayo ukusetshenziswa antihistamine wamafutha. Ukukhetha kwabo kukhulu, kodwa ngaphambi kokufaka isicelo kunoma iziphi ukuze uxhumane onguchwepheshe. Kube wamafutha antihistamine, ekhiqizwa ngesisekelo izinto zemvelo. Ukuze labo ukhilimu "Gistan" libhekisela. Lokhu ukulungiselela yenziwa ngokungeza antihistamine yemvelo eziqukethwe mncane birch namagxolo. Ukwakheka wamafutha ivumela ukusifaka iziguli ukungabekezelelani imithi, lapho izinga lokusetshenziswa kwamakhemikhali akunakwenzeka. The main esebenzayo ingxenye Gistana - betulin, okuyinto uyakwazi:
- khombisa umphumela anti-iguliswa futhi eqeda ukuvuvukala;
• lokufeza Ukuvikelwa antioxidant umzimba;
-proyavlyat izakhiwo immunomodulatory.
Betulin kuyinto adaptogen, futhi onkoprotektor antimutagen. Lombhalo ucashunwe ebhukwini of birch efihlekile, okuyinto eziqukethwe ukhilimu has umphumela antipruritic. Lokhu kuwukhulula ukucasulwa ubala futhi ububomvu kwesikhumba, futhi ine umthelela anti-fungal. Le into uyakwazi ukwehlisa ukuvuvukala. Lily amafutha esigodini, lupin, uchungechunge, violet, calendula - zonke lezi zingxenye kufakwe ukhilimu ukududuza isikhumba, bakhuthaza ukuphulukiswa yayo okusheshayo, athobe futhi baqinise izindonga isitsha.
Antihistamine asetshenziswa amafutha isikhumba zudah urticaria, ukuqubuka iguliswa esikhumbeni. Ngaphezu kwalokho, abazincomayo ukulunywa yizinambuzane, eczema, psoriasis, photodermatitis futhi bubble ezihlukahlukene.
ukhilimu Antihistamine "Ketopin" ezahlukene Ukwakheka eziyinkimbinkimbi. It has eqeda ukuvuvukala, isinqandakuvunda futhi magciwane isinyathelo, futhi kusiza ukuqeda ukulunywa, flaking futhi soma esikhumbeni. Ngo ngezithako zawo namafutha ayiqukethe hormone, okuyinto hhayi zivimbela inqubo yokwelapha kwezicubu. Ketopin akunabo ubuthi futhi has analgesic, antioxidant futhi umsebenzi elwa namagciwane.
Isicelo ezinconyiwe lokhu ukhilimu nge dermatitis iguliswa futhi contact nemvelo, dermatoses, ukulunywa ehlukahlukene izinambuzane, ukusha ukubasa etholwe ilanga futhi izindlela ezishisayo, eczema microbial, mitotic futhi ukubonakaliswa seborrheic.
yokugcoba Antihistamine zisetshenziswa ungqimba elincanyana phezu lesion isikhumba basihlikihle kancane. Inqubo wenziwa kanye ngosuku. Uma kudingeka, namafutha ingasetshenziswa izikhathi ezimbili noma ezintathu ngosuku. Inkambo yokwelashwa selunenyanga.
Izimo ukusetshenziswa wamafutha antihistamine iyona ukuzwela umuntu ukuba izingxenye zawo. Uma weqa umthamo kungaba ukwanda kancane igazi ekunqandeni. Yokugcoba lingasetshenziswa lihambisana namanye izidakamizwa.
Izidakamizwa "Colibacterin": isitatimende
Amavithamini 'Duovit' tekuvikela kwansuku